Ụgbọ elu ọhụrụ si San Jose gaa Palm Springs na ụgbọ elu Alaska
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu ọhụrụ si San Jose gaa Palm Springs na ụgbọ elu Alaska
Airlines • Airport • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụgbọ elu ọhụrụ si San Jose gaa Palm Springs na ụgbọ elu Alaska.
Ịchekwa ọrụ na-adịghị akwụsị akwụsị na San José bụ ihe kacha mkpa maka ọdụ ụgbọ elu International Palm Springs, ebe San José, yana mpaghara Bay ndị ọzọ, bụ ebe kacha elu maka ndị bi na azụmaahịa na ndagwurugwu Coachella.
Dị ka ọ dị taa, ndị njem nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ na-adịghị akwụsị akwụsị n'etiti ọdụ ụgbọ elu Mineta San José (SJC) na afọ niile. Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Palm Springs (PSP), Ekele Alaska Airlines.
Ụgbọ elu kwa ụbọchị na-apụ Mineta San José n'elekere 8:10 nke ụtụtụ, na-abata palm Springs tupu elekere 9:30 nke ụtụtụ, kwa ụbọchị. Maka ndị nọ na Palm Springs, ụgbọ elu kwa ụbọchị na-aga San José na-apụ na 10:10 ụtụtụ
John Aitken, Onye isi oche nke ụgbọ elu SJC kwuru, "ọrụ anaghị akwụsị akwụsị na Palm Springs bụ ụzọ a na-achọsi ike ruo ọtụtụ afọ." "njikọ a dị n'etiti Silicon Valley na Coachella Valley bụ ihe ịrịba ama na-akpali akpali nke mgbake, na mpaghara abụọ ahụ ga-erite uru na ọrụ dị mma, kwa ụbọchị."
"Ịchekwa ọrụ na-adịghị akwụsị akwụsị na San José abụrụla ihe mbụỌdụ ụgbọ elu Palm Springs International Airport"Ulises Aguirre, Onye isi nchịkwa nke ụgbọ elu maka Obodo Palm Springs kwuru. "San José, yana mpaghara Bay ndị ọzọ, bụ ebe kachasị maka ndị bi na azụmaahịa na Ndagwurugwu Coachella ma anyị nwere ekele maka ya. Alaska Airlines maka ijikọ PSP na SJC."
Mwepụta nke ọrụ na-amalite oge ezumike ekele ekele, nke na-amalite taa, na Mineta San José International na-atụ anya ndị njem 400,000 site na izu ụka na-abịa.